युवा अभियन्ता बोनिताले पाइन् तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड - VOICE OF NEPAL
७ आश्विन २०७७, बुधबार २१:२२ 108 ??? ???????
महिला र बालबालिकाको स्वास्थ्य र पोषणमा काम गर्दै आएकी युवा अभियन्ता बोनिता शर्माले अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड प्राप्त गरेकी छिन्। अमेरिकी अर्बपति बिल गेट्स र उनकी श्रीमती मेलिन्डाको नाममा स्थापित ‘गेट्स फाउन्डेसन’ले हरेक वर्ष प्रदान गर्ने ‘गोलकिपर ग्लोबल गोल्स प्रोग्रेस अवार्ड २०२०’ उनले जितेकी हुन्।
अवार्डसँगै उनले १० हजार अमेरिकी डलर पनि पाउनेछिन्। फाउन्डेसनबाट यो अवार्ड जित्ने उनी पहिलो नेपाली पनि हुन्। बोनिताले समुदायस्तरमा गरेको कामको मूल्यांकन गर्दै यो अवार्ड दिइएको फाउन्डेसनले जनाएको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा न्यूयोर्कमै आयोजित कार्यक्रममा अवार्ड प्रदान गरिने भए पनि यसवर्ष कोभिड-१९ का कारण त्यो सम्भव नभएको फाउन्डेसनले जानकारी गराएको बोनिताले बताइन्।
उनले गरेको कामको डकुमेन्ट्री बनाएर विभिन्न सञ्चारमाध्यम र विभिन्न ठाउँमा प्रेरणादायी कामको रूपमा देखाइन्छ। उनीसँगै यो अवार्ड नाइजेरियाकी एक महिला र भारतको एक संस्था (मास प्रोजेक्ट फाउन्डेसन) लाई दिइएको २२ सेप्टेम्बरमा गेट्स फाउन्डेसनको वेबसाइटमा राखिएको छ।
गेट्स फाउन्डेसनले दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न युवाहरूको अभियानलाई प्रेरित गर्ने काम गर्दै आएको छ। कुपोषण र भोकमरीको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले उनीसहित तीन युवाहरूले ‘सोसल चेन्ज मेकर्स एण्ड इनोभेटर्स (सोचाइ)‘ को शुरूआत गरेका छन्। सोचाइले पोषण माला तथा महीनावारी माला जस्ता नयाँ सिर्जनाहरू गर्दै आमा, बच्चा, किशोर/किशोरी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका तथा समुदायलक्षित कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ ।
को हुन् बोनिता ?
२८ वर्षिया बोनिता काठमाडौंमै जन्मेकी हुन्। आमा लक्ष्मी न्यौपाने र बुबा कृष्ण मुरारी भण्डारीकी पहिलो सन्तान उनले १९/२० वर्षको उमेरदेखि नै सामाजिक मुद्दामा काम गर्न थालेकी थिइन। आमा लक्ष्मी पनि महिला अधिकार र सामाजिक मुद्दामा काम गर्ने भएकाले आमाकै प्रेरणाले सामाजिक विषयमा काम गर्न प्रेरित भएको बोनिता बताउँछिन्।
उनले ४ वर्ष अगाडि पाँच हजार अमेरिकी डलरको ‘एशिया प्यासिफिक इनोभेसन अवार्ड २०१६’ जितेकी थिइन्। बागमती प्रदेशको योजना आयोगको पोषण तथा खाद्य सुरक्षा सञ्चालक समितिकी सदस्य समेत रहेकी उनी गत वर्ष बीसीसीले सार्वजनिक गरेको ‘विश्वका १०० महिला’को सूचीमा पनि परेकी थिइन्।
यसअघि उनले कुपोषण र भोकविरुद्ध काम गरेको भन्दै ५० हजार अमेरिकी डलरको अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड ‘लिड २०३० च्यालेन्ज २०१९’ पनि जितेकी थिइन्। सानै उमेरमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरकाे विभिन्न पुरस्कार प्राप्त गर्ने उनी सम्भवत: पहिलो नेपाली हुन्।